6 Deeq waxbarasho ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah ee Kanada 2022
Maqaalkan, waxaan shaaca ka qaadnay dhowr deeq waxbarasho oo buuxa oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Kanada ee loogu talagalay shahaadada koowaad, masters iyo Ph.D. barnaamijyada siday u kala horreeyaan. Inta badan deeqaha waxbarasho ee halkan ku taxan ayaa sidoo kale loo heli karaa in laga helo codsiyada ardayda Canadian-ka ah ee gudaha sidoo kale qaar ka mid ah ay si adag u yihiin labada dhinacba.
Wax ku barashada Kanada guud ahaan waa kharashyo ardayda caalamiga ah laakiin waad yareyn kartaa kharashaad badan oo ku lug leh haddii aad heli karto a deeq waxbarasho oo dhamaystiran daraasaddaada oo halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee buuxa ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Kanada oo aad u qalmi karto ama dalban karto.
Daacadnimo, inta ardayda caalamiga ahi heli karaan qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho markay la kulmaan shuruudaha qaarkood oo mararka qaarkood xitaa u baahan kara inay deganaansho ka helaan Kanada ama xitaa muwaadinimo, ardayda Kanada waxay u taagan yihiin fursado badan oo ay ku heli karaan deeqaha waxbarasho.
Wax ku barashada deeqda waxbarasho, gaar ahaan deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo ayaa ah wax aad u weyn oo arday walba u fududaaneysa, kaliya ma ahan ardayda caalamiga ah oo keliya, xitaa ardayda gudaha. Tani waa sababta ay ardaydu u wada joogaan meel kasta oo ay raadinayaan fursado waxbarasho oo aan dhammaad lahayn.
1 Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
1.1 Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha ee Jaamacadda Toronto
1.1.1 Ku saabsan Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha
1.1.2 Faa'iidooyinka Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha
1.1.3 Nidaamka Codsiga Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha
1.2 Lester B. Pearson Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
1.2.1 Ku saabsan Lester B. Pearson Barnaamijka Deeqda Caalamiga ah
1.2.2 Faa'iidooyinka Barnaamijka Deeqaha Caalamiga ah ee Lester B. Pearson
1.2.3 Lester B. Pearson Nidaamka Codsiga Deeqaha Caalamiga ah
1.3 Deeqaha Qalin-jabinta Ontario
1.3.1 Ku saabsan Ontario Scholarships
1.3.2 Faa'iidooyinka deeqda waxbarasho ee Ontario
1.3.3 Geedi socodka Codsiga deeqda waxbarasho ee Ontario
1.3.3.1 Liiska Iskuulada Kanadiyaanka ah ee Kaqeyb galaya Deeqaha Waxbashada ee Ontario
1.4 Ontario Trillium Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
1.4.1 Ku saabsan Barnaamijka Ontario Trillium Scholarship
1.4.2 Faa'iidooyinka Barnaamijka Deeqda-waxbarasho ee Ontario Trillium
1.4.3 Nidaamka Codsiga Barnaamijka Deeqda-waxbarasho ee Ontario Trillium
1.5 Deeqaha Waxbarashada ee Vanier Canada
1.5.1 Ku saabsan Vanier Canada Deeqaha Qalin-jabinta
1.5.2 Faa'iidooyinka deeqaha waxbarasho ee Vanier Canada
1.5.3 Nidaamka Codsiga Deeqaha Shahaadada ee Vanier Canada
1.6 Inbadan oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee buuxa ee ardayda caalamiga ah ee Kanada
Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha (Shahaadada Jaamacadeed, UoT)
Lester B. Pearson Barnaamijka Deeqda Caalamiga ah (Jaamacadeed)
Vanier CGS-Abaalmarinta Wakaaladda Saddex-geesoodka ah (Ph.D)
Deeqaha Shahaadada Ontario (Master's, PhD)
Barnaamijka Ontario Trillium Scholarship (Ph.D)
Deeqaha Vanier (Ph.D)
Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha ee Jaamacadda Toronto
Ku saabsan Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha
Culimada Madaxa ee Barnaamijka Hagaajinta waxaa badanaa loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad, kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudaha intaba. 90 arday ayaa la aqbalaa sanad kasta deeqda waxbarashona waxay u dhigantaa $ 10,000 oo kaash ah iyo faa'iidooyin kale.
Sida ay hadda tahay, aqoonyahannada Madaxweynaha ee deeqda waxbarasho ee heer sare waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu fiican ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Kanada oo la heli karo sanadkiiba isla markaana u furan helitaanka codsiyada bilaashka ah.
Sida laga soo xigtay Jaamacadda Toronto, Qiyaastii 90 ee ardayda dugsiga sare ee ugu aqoonta sare leh ee codsanaya sanadka ugu horreeya ee gelitaanka tooska ah, daraasadaha shahaadada koowaad waxaa loo kala saari doonaa inay yihiin Aqoonyahannada Sare ee Madaxweynaha.
Deeqdan waxaa si otomaatig ah loo siiyaa ardayda dhigata dugsiyada sare ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee codsanaya barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadeed ee Jaamacadda Toronto iyada oo laga gaarayo guul tacliimeed heer sare ah diiwaanka waxbarashadoodii hore.
Codsadeyaasha kaqeybgalay machad kasta oo dugsiga sare ka dambeeya xaq uma laha deeqdan waxbarasho inkasta oo ay weli codsanayaan barnaamijka shahaadada koowaad ee UoT.
Faa'iidooyinka Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha
Lacag caddaan ah oo dhan $ 10,000
Helitaanka helitaanka shaqada xerada ka dib sanadka labaad ee daraasadda
Fursad waxbarasho oo caalami ah
Helitaanka buuxa ee ilaha
Faa'iidooyinka kale ee aan caadiga ahayn
Nidaamka Codsiga Barnaamijka Aqoonyahanada Sare ee Madaxweynaha
Ma jiro codsi gaar ah oo loogu talagalay barnaamijkan. Ardayda waxaa si otomaatig ah loogu tixgeliyaa deeqdan waxbarasho inta lagu jiro dib u eegista arjiga.
Tani waa in la yiraahdo dhammaan waxaad u baahan tahay inaad dalbato deeqdan waxbarasho waa inaad dalbato barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadeed ee Jaamacadda Toronto.
Lester B. Pearson Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Ku saabsan Lester B. Pearson Barnaamijka Deeqda Caalamiga ah
Tani waa mid ka mid ah tartamada deeqaha waxbarasho ee ugu adag ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Kanada maadaama ay dabooleyso waxbarashada, buugaagta, khidmadaha lama filaan ah iyo waxyaabo kale oo badan.
Deeqdan waxbarasho ayaa kaliya looga kireysan karaa Jaamacadda Toronto ee Kanada waxayna ku saleysan tahay talo bixin, qiimeyn iyo tixgelin.
Dugsiga sare ee aad ka timaaddo waa inuu kugula taliyaa si toos ah deeqdan waxbarasho ka hor intaadan dhammaystirin foomka dalabka khadka tooska ah ka dib jaamacadda ayaa markaa qiimeyn doonta faahfaahintaada si ay u go'aamiso haddii laguu tixgelin doono iyo in kale.
Kaliya 37 codsadeyaal ayaa ugu dambeyntii loo doortay inay ka-faa'iideystayaal u helaan deeqdan waxbarasho sanad walba.
Faa'iidooyinka Barnaamijka Deeqaha Caalamiga ah ee Lester B. Pearson
Wuxuu daboolayaa waxbarid buuxda
Taageero deganaansho oo buuxa
Lester B. Pearson Nidaamka Codsiga Deeqaha Caalamiga ah
Sidii aan horay u sheegay, waxaad u baahan tahay inuu kugula taliyo iskuulkaaga si aad awood ugu yeelatid inaad buuxiso arjiga deeqdan waxbarasho. Sikastaba, waxaad ka heli kartaa buuxa faahfaahinta arjiga halkan.
Deeqaha Qalin-jabinta Ontario
Ku saabsan Ontario Scholarships
The Deeqaha Qalin-jabinta Ontario waxay u furantahay inay hesho codsiyada kaliya ardayda Masters iyo PhD ee xarumaha kaqeyb galaya Ontario. Deeqda waxbarasho lagama heli karo jaamacad Kanada ku taal oo ka baxsan Ontaariyo.
Waxay u dhigantaa qiyaastii $ 10,000 sanadkiiba taas oo lagu bixin karo nus laba jeer sanadkiiba.
Deeqda waxbarasho ayaa loo heli karaa dhammaan maadooyinka daraasadda illaa inta dugsigu ka mid yahay dugsiyada ka qayb qaadanaya.
Faa'iidooyinka deeqda waxbarasho ee Ontario
$ 5000 La Bixiyay sanadkiiba laba jeer.
Geedi socodka Codsiga deeqda waxbarasho ee Ontario
Si loogu tixgeliyo deeqda waxbarasho ee 'Ontario Graduate Scholarship', waa inaad buuxisaa shuruudaha soo socda:
Waxaad ku jiri doontaa daraasadaha qalin-jabinta ee maadada ama heerka dhaqtar
Waxaa lagugu qori doonaa barnaamij waqti-buuxa ah 2 ama in ka badan oo shuruudo ah (21 illaa 52 toddobaad marka la isku daro) sannad-dugsiyeedka aad gudbineyso dalabkaaga.
Waxaad xaadiri doontaa mid kamid ah kaqeyb galka dugsiga Ontario
Liiska Iskuulada Kanadiyaanka ah ee Kaqeyb galaya Deeqaha Waxbashada ee Ontario
Ontario Trillium Deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah ee Kanada
Ku saabsan Barnaamijka Ontario Trillium Scholarship
Barnaamijka Ontario Trillium Scholarships (OTS) waa qorshe muhiim ah oo loogu talagalay in lagu soo jiito ardayda caalamiga ah ee ugu sareysa Ontario daraasaadka PhD.
Deeqdani waa mid si gaar ah loogu talagalay ardayda caalamiga ah oo kaliya mana codsan karaan ardayda Canadian-ka ah.
Ardayda xiiseyneysa Ontario Trillium Scholarships waxaa lagu dhiirigelinayaa inay u muujiyaan xiisaha ay u qabaan tartanka barnaamijka qalin-jabinta markay codsanayaan gelitaanka mid ka mid ah iskuulada Kanada ee kaqeybgalaya.
Waa inaad tahay a ardayga caalamiga ah leh ansax ah Fiisada ardayga Kanada si aad ugu qalantid codsiga deeqdan.
Faa'iidooyinka Barnaamijka Deeqda-waxbarasho ee Ontario Trillium
Qadarka deeqda waxbarasho ee $ 40,000 sanadkii
Nidaamka Codsiga Barnaamijka Deeqda-waxbarasho ee Ontario Trillium
Mid kasta oo ka mid ah Ontario Trillium Scholarship oo kaqeybgalaya dugsiga Kanada sida caadiga ah wuxuu leeyahay nidaam codsi u gaar ah laakiin marka hore waa inaad sheegtaa xiisaha deeqda waxbarasho inta lagu guda jiro codsigaaga gelitaanka mid ka mid ah iskuulada waana inaad u magacawdaa deeqda waxbarasho Guddoonka Sare ee barnaamijka qirashada.
Qaar kamid ah iskuulada kaqeyb gala sida Jaamacadda Toronto tixgeli ardayda si toos ah deeqda waxbarasho.
Ku saabsan Vanier Canada Deeqaha Qalin-jabinta
Deeqaha Waxbarashada ee Vanier Canada - Tani waa deeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay ardayda Kanada oo kaliya loogu talagalay ardayda PhD. Codsigu wuu furan yahay sanadle iyo meelo badan oo deeq waxbarasho ah ayaa furan.
Deeqdani waxay sidoo kale ku saleysan tahay talobixin maadaama ay kugula talinayso jaamacaddaada in laguu tixgeliyo deeqdan waxbarasho.
Faa'iidooyinka deeqaha waxbarasho ee Vanier Canada
$ 50,000 deeq waxbarasho oo buuxda oo la bixiyo sanadkii
Nidaamka Codsiga Deeqaha Shahaadada ee Vanier Canada
Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta buuxda iyo habka arjiga loogu talagalay Halkan Vanier Canada Graduate Scholarship.
Inbadan oo ku saabsan deeqaha waxbarasho ee buuxa ee ardayda caalamiga ah ee Kanada
Haddii aad awood u leedahay inaad hesho deeq waxbarasho oo buuxda oo laga helo Kanada oo daboolaysa khidmadaha waxbarashada oo buuxa sida mid ka mid ah kuwa aan kor ku soo qoray, markaa waad hubi doontaa inaad dhammaystiri karto waxbarashadaada adigoon walwal qabin.
Waxaan ka qoray wax ku saabsan dhowr deeq-waxbarasho oo buuxda iyo qayb ahaan (kaalmo) ah Kanada gudaheeda labada Ph.D., Masters iyo ardayda shahaadada jaamacadeed. Sida ay hada tahay, kuwa aan wali galin jaamacada way dalban karaan deeqaha waxbarasho ee shahaadada koowaad ee Kanada hadday nasiib u yeeshaan inay dugsigu isla sanadkaas galaan.
Sababta aan u go'aansaday in aan wax uga qoro mowduucan ayaa ah in aan sii wado ballanqaadkii aan sameeyay ee ahaa in aan ka caawiyo ardayda caalamiga ah in ay helaan macluumaad kasta oo sax ah oo ay ugu baahan yihiin in ay dibadda ku bartaan ama in ay ka dhigaan riyadooda ah in ay dibadda wax ku bartaan mid la gaari karo.
Haddii aad tahay arday caalami ah oo aad jeclaan lahayd inaadan ka maqnaan mid ka mid ah cusbooneysiintayada ku saabsan deeqaha waxbarasho ee dhowaan la sii daayay ee aad dalban karto, waad rukumo adeeggayaga digniinta iimaylka bilaashka ah oo waxaad heli doontaa emayl ka kooban soo koobista tilmaamaha iyo deeqaha waxbarasho ee aan daabacno maalin kasta.
Ku laabo mawduuceena maalinta. Jaamacadaha sida Jaamacadda Toronto Kanada gudaheeda, khidmadaha waxbarashada oo keliyi waa illaa $ 50,000 oo haddii aad rabto inaad ku darto boodh sidoo kale, waxay noqonaysaa $ 70,000. Yaab.
Lacagta noocan ah waxay u dhigantaa malaayiin dhowr lacagood iyada oo sidaas oo kale ay aad qaali ugu tahay ardayda caalamiga ah Aad ayey qaali u tahay in xitaa haddii lagu siiyo deeq waxbarasho% 50 ah, laga yaabo inaadan wali awoodi karin inaad sameyso inta harsan ee ah 50%. Tani waa sababta deeqaha waxbarasho ee buuxa ay yihiin waxa aad u baahan karto.
In kasta oo, laga reebo deeqaha waxbarasho ee buuxa, waxaad heli kartaa deeq waxbarasho oo qayb ah laakiin leh hubsiimo kambuyuutar shaqeed oo kaa caawin kara inaad kasbato lacag badan si aad naftaada u taageerto. Sidee qabow u dhawaaqaas?
Tani waxay ahayd sababta aan u qoray hage muddo ka hor Sida wax looga barto loona shaqeeyo Kanada. Waan ogahay ardayda caalamiga ah inay had iyo jeer fiiriyaan fursadaha noocaas ah.
Kuwa haysta ama waalidkood haystaan ​​xoogaa lacag ah oo ay ku daryeelaan waxbarashadooda Kanada, waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad saf ugu jirto safka dhaadheer ee dalbanaya deeqaha waxbarasho. Waxaad go'aansan kartaa inaad raadsato hagitaankeyga 10 jaamacadaha ugu raqiisan Kanada, waxaa laga yaabaa inaad u aragto khidmadooda mid la awoodi karo.
Ama wali si fiican, waxaan ku qoray hage kale Jaamacadaha ku yaal Kanada oo aan wax lacag ah ka dalbanin dalabka gelitaanka. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad iska hubiso jaamacadahaas. Waad ogtahay khidmadaha xad-dhaafka ah ee qaar ka mid ah jaamacadahaani ay ka qaadaan maadaama lacagaha dalabku ay xun yihiin oo dadka qaar iska celinayaan laakiin taasi waa jidka.
Wixii ku saabsan deeqaha waxbarasho ee buuxa ee ardayda caalamiga ah ee Kanada liiska ku yaal halkan, waxaan ku siiyay sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida deeqahaasi u shaqeeyaan, sida aad u codsan karto iyaga, waxa ay u qalmaan iyo faa'iidooyinka ay ku heshiiyeen, imisa arday oo ay aqbalaan sanadwalba sidoo kale waxay siisay iskuxir codsi akhristayaasha xiisaynaya inay codsadaan.
Sikastaba, waa inaad sidoo kale ogaataa inay jiraan barnaamijyada khadka tooska ah ee Kanada ee aad uga qayb geli karto bilaash meel kasta oo adduunka ah? Barnaamijyadani waa kuwo heer sare ah oo dhammaantood loogu talagalay ujeedooyin gaar ah.
Kaqeybgalka barnaamijyada khadka tooska ah sidoo kale wey wanaagsantahay. Waxay kor u qaadeysaa CV-gaaga, waxay ku kordhineysaa aqoontaada, waxayna sidoo kale hagaajineysaa fursadahaaga inaad ku guuleysato deeq waxbarasho ama xitaa inaad soo degto shaqo mushahar sare leh.
Deeqda waxbarasho ee Vanier ayaa ah tan ugu dambeysa liistadeyda deeqaha waxbarasho ee Kanadiyaanka ah ee daboolaya khidmadaha waxbarashada oo buuxa. Sidaad ku heshiin doontaan, maahan dhammaan deeqaha waxbarasho ee halkan dhab ahaantii bixiya ilo dhaqaale oo awood u leh inay daboolaan khidmadaha iskuulka oo buuxa laakiin markaa, ku dhowaad dhammaantood waxay bixiyaan faa'iidooyin daboolaya ugu yaraan khidmadaha waxbaridda oo dhammaystiran waxayna bixiyaan taageero iyo fursado shaqo arday oo kaa caawin kara inaad lacag badan ururiso. si loo daboolo kharashyada badan ee soo bixi kara.
Waxaa jira dhowr waxbarasho dibedda waxbarasho ah lagu sii daayo maalin kasta barkeenna sidaa darteed waxaan kugula talin doonaa inaad qorto ama keydiso www.sanation-390e0d.ingress-erytho.easywp.com Meel si aad u booqan kartid subax kasta si aad u hubiso fursadaha deeqaha waxbarasho ee dhowaan la sii daayay oo aad u dalbato kuwa aad u qalanto.
Waxaa jira tartan badan oo ka socda booska deeqda waxbarasho ee aad u baahan tahay inaad sameyso wax dheeraad ah si aad uga horreyso kuwa kale. Ha nasan ka dib markaad codsato hal deeq waxbarasho oo keliya. Dalbo deeq waxbarasho oo kasta oo aad u-qalanto maxaa yeelay inta badan deeqaha waxbarasho ee aad dalbatid, waxay sare u qaadeysaa fursadahaaga inaad ku guuleysato.
Si daacadnimo ah, deeqaha waxbarasho ee buuxa ee Kanada waa kuwo tartan badan. Ku dhowaad arday kasta oo caalami ah oo indhaha ku haya Kanada ayaa ku boodaya dhammaan deeqaha waxbarasho tanina waxay ka dhigeysaa tartanka mid aad u sarreeya.
Heerka aqbalaadda qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho ayaa u hooseeya 2% sidaa darteed waxaa jira fursado aad u yar oo la doorto.
Taladaydu waa inaadan ka waantoobin. Diirada ha saarin kaliya jaamacadahan waaweyn, qaar iyaga ka mid ah ayaa tartan badan leh oo ay adag tahay inay ku aqbalaan. Waxaan wadaagnaa hagitaan waqti ka waqti oo ku saabsan sida aad u heli karto labadaba gelitaanka iyo deeqaha waxbarasho ee jaamacadaha yar yar oo aad ku faraxsanahay inaad sameysay.
Si aad u hesho hageyaashan bilaash, booqo www.sanation-390e0d.ingress-erytho.easywp.com oo ku jira biraawsarkaaga ama adiguba like saar boggayaga Facebook si aad u hesho wararkeena ugu dambeeyay.
Liiska Deeqaha Shahaadada Jaamacadeed ee ugu Fiican Kanada
Liistada deeqaha waxbarasho ee ugu dambeeya ee qalin jabinta Kanada
Liiska deeqaha waxbarasho ee Dawladda ee Kanada
Liiska Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Kanada
Liiska Jaamacadaha Kanada oo aan lahayn Khidmad Codsi
Sida saxda loo Codsado loona guuleysto deeqaha waxbarasho ee Kanada
deeqo waxbarasho oo buuxa oo laga heli karo canadadeeqaha internetka ee kanadiyaanka ahdeeqaha waxbarasho ee Kanadiyaankadeeqaha waxbarasho ee masters masters buuxa ee canadawaxbarasho buuxda oo ah deeqda waxbarasho ee PhD ee canadadeeq waxbarasho oo dhameystiran oo ku saabsan canadadeeq waxbarasho oo buuxdadeeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay ardayda caalamiga ahdeeq waxbarasho oo buuxda oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee Kanadadeeq waxbarasho oo buuxda oo laga helo Kanadadeeq waxbarasho oo buuxda oo ah deeqda waxbarasho ee Kanadadeeqaha waxbarasho ee Kanadawax ku baro deeqaha waxbarasho ee dibadda Kanada
Post Next:15 Koorsooyinka Kimistariga Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Online-ka ah ee wata Shahaadooyinka